"Batsirai, ndinoda kurarama!" Mhinduro kubva kuHawaii kuenda kuUK kupedza Samoa Measles emergency
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » "Ndibatsire, ndinoda kurarama!" Mhinduro kubva kuHawaii kuenda kuUK kupedza Samoa Measles emergency
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • Samoa Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
"Ndibatsire, ndinoda kurarama!" Mhinduro kubva kuHawaii kuenda kuUK kupedza Samoa Measles emergency
Solomon Islands: Vashanyi vanopinda vanofanirwa kuve nehumbowo hwejekiseni rinorwisa gwirikwiti
Vashanyi vanogamuchirwa zvakare muSamoa, chero bedzi vafambi vanosvika vaine chitupa chekubaira gwirikwiti. Samos akasimudza yavo Measles State yeEmergency.
Samoa.travel inoti: “Tsika yedu inodziya, ine ushamwari uye nzvimbo dzinoyevedza dzinoita kuti Samoa ive nzvimbo yakanaka pachitsuwa chePacific yekushanya.”
Kubuda kwegwirikwiti kweSamoa kwe2019 kwakatanga munaGunyana 2019. Kubva musi wa26 Zvita, pakanga paine vanhu zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezviuru zvegwirikwiti uye kufa kwevanhu makumi masere nemasere, kubva muvagari vemuSamoa vanosvika mazana maviri nemazana masere nemazana masere nemakumi manomwe nenomwe. Vanopfuura zvikamu zviviri muzana zvevanhu vakatapukirwa
Vanachiremba navanamukoti kubva kutenderera pasirese, kubva kuHawaii kuenda kuUK vakasiya Krisimasi neshamwari uye mhuri kuti vabatsire kuponesa hupenyu mukupararira kwegwirikwiti muPacific Island Nation.
Mamiriro ekukurumidzira akaziviswa musi wa17 Mbudzi, achiraira kuvharwa kwezvikoro zvese, kuchengeta vana vari pasi pemakore gumi nemanomwe kure nezviitiko zveruzhinji, uye kuita kuti nhomba yekumanikidza. Musi wa17 Zvita, mamiriro ekukurumidzira akawedzerwa kusvika musi wa14 Zvita. Mumiriri weSamoa anodzivirira nhomba Edwin Tamasese akasungwa akapomedzerwa mhosva yekukurudzira "hurumende."
Musi wa2 Zvita 2019, hurumende yakamisa mutemo wekudzokera kumba uye yakanzura mhemberero dzese dzeKisimusi pamwe nekuungana kwevanhu. Dzese mhuri dzisina kubayiwa majekiseni dzakarairwa kuti dziratidze mureza mutsvuku kana jira pamberi pedzimba dzavo kuti vayambire vamwe nekubatsira nhomba yekudzivirira. Dzimwe mhuri dzakawedzera mameseji anoti "Rubatsiro!" kana "Ndinoda kurarama!".
Musi wa5 na6 Zvita, hurumende yakavhara zvese zvimwe kunze kwezvekushandisa zveruzhinji kuendesa vese vashandi vehurumende kumushandirapamwe wekudzivirira. Iyi nguva yekumiswa yakasimudzwa musi wa7 Zvita apo hurumende yakafungidzira kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu zvakasvikirwa nechirongwa chekubaisa. Kubva musi wa90 Zvita, inofungidzirwa kuti 22% yevagari vemo vakakodzera vakabayiwa jekiseni.
Inbound Vashanyi kuSamoa unofanirwa kuve nehupo hwekudzivirira gwirikwiti.